> Resource > Talooyin > Songs Talooyin Muqaal Wedding - Songs u Wedding Muqaal
Xaflad Wedding waa dhacdo xasuus ah ee arooska iyo aroosadda labadaba, gaar ahaan aroosadda. Oo waxay ahaan waa qaar ka mid ah music arooska. Halkan waxaa noo songs slideshow arooska talooyin ah ee xafladda arooska iyo soo dhaweynta. Kuwan oo dhan songs slideshow arooska waa badan haddii aad slideshow aroos, taas oo Radidiyaha lahaa daqiiqado wareegto arooskooda laba idinka mid ah oo ka hor xafladda arooska ama la sameeyo in la xasuusto ka dib markii dad badan oo aroos sawiro toogtay.
Haddii ay aroos aad saaxiib ayaa, waxa kale oo aad ka qaadan karin video arooska heeso ka hoos ku qoran oo lagu biiriyo ka arooska iyo aroosadda ayaa sawiro galay slideshow arooska leh music slideshow arooska oo uu gubaa siduu DVD hadiyad, ka dibna u soo dir asxaabtaada. Waxaa laga yaabaa inay si cajiib ah in aad iyaga siin doontaa hadiyado sidaas oo qaali ah oo aad u qaali.
Wondershare DVD Slideshow Builder Deluxe waa u fududahay ah in la isticmaalo software slideshow arooska taas oo kaa caawinaysaa in aad ka dhigi DVD arooska kaamil ah. Waxaa laga yaabaa inaad soo bixi version a free of software slideshow arooska halkan iyo bilowdo samaynta aad slideshow arooska la kaamil ah songs slideshow arooska.
Hoos waxaa ku qoran tusaalooyinka qaarkood ee wanaagsan music slideshow arooska si kor slideshow arooska dhammaataan:
Wedding songs slideshow liiska
Aroosadda ayaa soo koraya:
Sir George Ivan Morrison, Jr., OBE waa Northern Irish heesaa, Xisbi, iyo muusikiiste.
2. Waxaad tahay si Beautiful by Joe Cocker
Pop, naf buluug ama weershe ah
John Robert "Joe" Cocker, OBE ahayd heesaagii ah Ingiriisi iyo muusikiiste. Waxa uu caan ku ahayd codkiisa kana, dhaqdhaqaaqa jirka spasmodic waxqabadka, iyo qoraalkii kama dambaysta ah ee heeso caan ah.
3. Balanbaalis oo dhunkaday by Bob Carlisle
Christian & Injiil
Robert Mason "Bob" Carlisle waa heesaa American Casriga Christian iyo Xisbi. Waxa uu u ciyaaray ee guutooyinkiisa oo dhowr ah, gaar ahaan Xulafada iyo Billy kulul, ka hor bilaabay xirfadiisa ah Solo halkaas oo uu ka helay Award Grammy iyo afar Dove Awards.
4. Miss Independent by Kelly Clarkson
Dhagaxayga weyn Pop, R & B
Kelly Brianne Clarkson waa heesaa Maraykan iyo Xisbi. Waxay u kacay inuu warkiisa 2002 ka dib markii uu ku guuleystay xilli ciyaareedkii hore ee American Idol, ayaa tan iyo markii la aasaasay sida "Original American Idol ayaa."
5. Girl by lay jirrabayay ayaa
6. Haweeney Pretty by Roy Orbison
Roy Kelton Orbison, sidoo kale loo yaqaano naanaysta Big O ayaa, ahaa Maraykan ah oo gabayaa ahaa-Xisbi, sida ugu fiican u yaqaan for muraayadaha uu summad, kala, cod awood leh, walxuhu adag, iyo ballads dareenka madow.
7. Waxay Lady ah by Tom Jones
Sir Thomas John Woodward, OBE, loo yaqaano magiciisa stage Tom Jones, waa gabayaa ahaa Welsh. Tan iyo 1960-bartamaha, Jones ayaa ku gabyeen Hababka badan oo caan ah oo music - pop, Oo dhagax weyn, R & B, Gurtida show, dalka, qoob ka ciyaarka, iyo naf iyo injiilka - iibiyey in ka badan 100 milyan oo diiwaanka.
Aroos ayaa soo koraya:
3. Balanbaalis oo dhunkaday by Bob Carlisle i
8. Waxaan u tag Back by Kenny Chesney
Kenneth Arnold "Kenny" Chesney waa heesaa music dalka Mareykanka iyo Xisbi. Waxa uu duubay iyo toban albums, afar iyo toban ka mid ah kuwaas oo shahaado dahab ama wax ka sareeya by RIAA ah.
9. Halkaan hoose waxaa maqli Wiilkana waxay by Denise Williams
R & B, synthpop, qoob-pop, tiradda
Deniece Williams waa heesaa, Xisbi iyo rikoor ah soosaare Maraykan ah guul ee 1970 iyo 1980.
10. My Guy by Diana Ross iyo Supremes ah
Diana Ernestine Earle Ross waa heesaa, Jilaa, record soo saare American iyo Xisbi marmar.
11. Boy waxaan ahay qeybiso Guursada by kiristaalo ayaa
Jazz, pop, Oo dhagax weyn
Kiristaalo waa koox vocal American ku salaysan ee New York, loo tixgeliyo mid ka mid ah falalka lagu qeexo Zaman group gabar ee qeybtii hore ee 1960.
12. Young by Kenny Chesney
Waxay si wadajir ah nolosha:
The songs soo socda ayaa sidoo kale ku habboon in ay isticmaalaan u slideshow arooska ee dhabta arooska sawiro ah.
13. fiican u wada by Jack Johnson
Dhagaxayga weyn loomana baahno
14. Laga soo bilaabo tan Moment by Shania Twain
Country pop, qof weyn oo casri ah
Shania Twain, OC waa gabayaa ahaa Canadian iyo Xisbi. Twain iibiyey in ka badan 85 million diiwaanka, iyada mid ka mid ah fanaaniinta aduunka ee ugu iibinta ee waqtiga oo dhan samaynta.
15. Sidee u macaan Waa by James Taylor
Soul; dhagaxayga weyn pop hore
James Vernon Taylor waa Maraykan ah oo gabayaa ahaa-Xisbi iyo guitarist. A shanta jeer Grammy Award guusha, Taylor ayaa lagu degmnada galay Rock iyo Roll Hall of Fame 2000.
16. Waxa uu si laguu by Frank Sinatra (versions cover kala duwan ee la heli karo)
Francis Albert "Frank" Sinatra ahaa oo gabayaa ahaa, actor, agaasimaha, iyo soo saare filim American.
17. Waxaan Idin Beatles
Dhagaxayga weyn Folk
Beatles ayaa waxay ahaayeen duubida Ingiriisi, sameeyay ee Liverpool ee 1960. Iyadoo xubnaha John, Paul McCartney, George Harrison Ringo Starr Lennon iyo, waxay ogeysiiyeen noqday arkaa ficil ugu weyn oo ugu saameynta badan ee Zaman dhagaxa.
18. Jacaylka by Nat King Cole
Jazz, pop dhaqanka
Nathaniel Adams Coles, oo loo yaqaan xirfad sida Nat King Cole, ahayd heesaagii Maraykan ah oo hore u yimid caan kale biyaaniiste jazz keentay.
19. Na soo eeg by Vince Gill
Vincent Grant "Vince" Gill waa American dalka Fanaanada-Xisbi iyo multi-instrumentalist.
20. Love noqon doono Home by Susan Ashton
Music Christian Casriga
Susan Ashton waa Music iyo music dalka Christian artist Maraykan ah oo casri ah kuwaas oo gooldhalinta Christian kaalinta dhan 1990.
Qaar ka mid ah in ka badan songs slideshow arooska, waxaad tagi kartaa heeso aroos .
Qaar ka mid talooyinka slideshow arooska iyo fikrado
• Ha ka Yeelina u slideshow aroos aad u dheer. Tani hubaal waa dhibic si stress. Ugu badnaan 10 daqiiqo - 6. Sidaas ayaad dareenka aad dhagaystayaasha ku dhawri doontaa. Haddii aadan rabin in la sameeyo arooska Muqaal dhacdo weyn, laakiin waan jeclaan lahaa in aan u ordo iyo goorba ee asalka ah ee laptop ah, ka dibna waxa ay ka dhigi doontaa sida inta aad rabto
• Dooro sawiro ama gaaban clips video in soo bixin doonaa qaar ka mid ah wax ka qabashada dareenka arooska ka martidaada. Ka fikir 2 sano aroos jir qubeyska xumbo ah, aroosadda uu isu diyaarinayo iyada qoob ka ton, ama sawir dugsiga ee dhoola xumadooda, a.
• Maskaxda ku hay in inkasta oo ay aad u ogaadaan dadka ku photos yihiin, qaar ka mid ah martidaada aanan. Sidaa darteed guraan aad slideshow arooska laba ama saddex qaybood ama "goobaha" - mid ka mid ah aroosadda inta aanay la kulmay arooska, mid ka mid ah aroos naftiisa la aroosadda ka hor iyo ka dibna mid ka mid ah noloshooda tan iyo markii ay kulmeen. Haddii aad isticmaalayso laba qaybood, ka dibna waxa ay mid ka mid ah labada qof ee sida ay soo koraysay iyo qaybta labaad ee labada wada. Kala mid kasta oo hordhac ah text yar oo slideshow music aroos ama heeso kala duwan.
• Iska ilaali isticmaalka qoraalka oo aad u badan. Dadku ma doonayaan in ay leeyihiin in ay akhriyaan oo aad u badan. Ka dib oo dhan, sawir qiimihiisu yahay kun oo eray!
• Ku dar dhaqdhaqaaqa qaar ka mid ah si aad slideshow arooska. Ha ku tiirsan oo keliya arrimaha u dhexeeya sawiro. Yarey galay qaar ka mid ah sawirada iyo qaar ka mid ah ku darto video footage haddii aad leedahay.
Free download software arooska slideshow iyo bilaabaan in ay sameeyaan slideshow aroos la si fiican u doortay arooska slideshow music in uu korka arooska!
U dir Messages Facebook aan Rasuulka
Sida loo abuuro Collages Isticmaalka iPhoto